Otu esi eme plastik site na mmiri ara ehi ma ọ bụ Galalith - Ikkaro
Inicio >> Nlekọta ụlọ >> Otu esi eme plastik site na mmiri ara ehi ma ọ bụ Galalith
Este nnwale ọ dị ezigbo mfe. Ọ bụ ezie na ihe etolitere n'ezie abụghị plastik, kama casein, protein mmiri ara ehi, mana nsonaazụ nke nnwale ahụ yiri plastik ;) E nwere ndị na-akpọ ya Bioplastic.
Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, kwuo na e mepụtara ihe a na 1898 na afọ ndị ọzọ Coco Chanel M ga-eji «nkume mmiri ara ehi»Ma ọ bụ Galalith maka ha Fantasy jewels.
Aha ndị ọzọ enyere Galalith bụ: Galalite, mmiri ara ehi, mmiri ara ehi.
Iko 1 mmiri ara ehi
4 teaspoons nke mmanya
Nzọụkwụ site na nhazi
Ugbu a, anyị ga-ekpo mmiri ara ehi ahụ mana ịhapụ ịhapụ ya ka ọ sie. Ozugbo ekpo ọkụ anyị na-awụpụ ya n'ime iko ma ọ bụ nnukwu efere.
Anyị tinye mmanya na nwuo maka 1 nkeji.
Emeela !! Anyị na-agbanye mmiri ara ehi n'ime colander ma na-edebe mgwakota agwa ahụ.
Ugbu a, ọ ga - anọgide na - emetụta ya ma ọ bụ tinye ya na ebu ma hapụ ya maka ụbọchị ole na ole iji jụụ.
Mana ịgbaso ya anaghị arụpụta ezigbo nsonaazụ, opekata mpe ndị na-atụ anya inweta ọla maka Coco Chanel.
Nnwale mbụ na-eme Galalith
Anọ m na-anwale uzommeputa maka Galalith ma ọ bụ mmiri ara ehi plastik na nsonaazụ ya abụtụ ihe na-akụda mmụọ.
O doro anya na site na ịmegharị usoro ahụ na ịkụ aka na igodo ahụ, ma ọ bụ aghụghọ ahụ, anyị nwere ike ịnweta mpempe ndị na-adọrọ mmasị, mana maka oge ahụ ọ dịbeghị otu ahụ.
Ekwuola Ntụziaka ahụ. Emeela m mmiri ara ehi ahụ ma tupu m esi esi tinye m na iko, etinyewo m agba agba nri n'ọnọdụ ụfọdụ wee tinye mmanya. Nfuli na-etolite ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo, flocs site na mado nke bụ casein.
Ọ bụrụ na anyị ejiri nsogbu na-adịkarị, ọtụtụ casein na-ala n'iyi. Mma iji a Chinese strainer, otu nke ákwà ndị ahụ ga-ejigide ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-ekwe ka anyị ka mma ichu mmiri.
Gba agba na nri na-arụ ọrụ nke ọma. N'ezie, ịhapụ ya na ebu adịghị ezu.
Iberibe nke anyị tinyebere plastik ahụ agwụla. Dị ka nke dị na foto a.
N'aka nke ọzọ, na iberibe ebe m tinyegoro mgbali ụfọdụ, nsonaazụ ya ka mma.
Karịsịa mpempe akwụkwọ a
A isiike na ìhè plastic na-anọgide. Mgbe otu izu ọ na-egosi "mmanụ" mana ọ bụ ezie na ọ ka na-enye mmetụta nke fragility, enwere ike ịme ihe na ogo a.
Na m iberibe nke mmanya mmanya na-anọgide, ikekwe n'ihi mmegbu, Galalith kwesịrị ịbụ isi
Maka nyocha ndị ga-eme n'ọdịnihu
Ihe iji melite ule ndị a:
mma iche mmiri site na casein na itinye nrụgide na iberibe.
Gbalịa iji ihe ọ lemonụ lemonụ lemon karịa mmanya dị ka a tụlere na nke a Ntụziaka
jiri formaldehyde mechaa akụkụ ahụ ma hụ ihe mere
Njirimara nke casein
Casein anaghị edozi mmiri na acid, ọ bụ ezie na ịkpọtụrụ ha ma ọ bụ alkalis nwere ike ime ka egwu. Ọ bụ ihe na-esi ísì ụtọ, nke na-adịghị agbanwe agbanwe, nke na-adịghị emerụ ahụ, antistatic, na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ire ọkụ (ọ na-ere nwayọ nwayọ ma na-enwu gbaa na ikuku, mana ọ na-erepụ site n'iwepụ isi iyi nke ire ọkụ ahụ. Ọ na-esi ísì isi nke ntutu na-ere ọkụ).
Isi mmalite na amaokwu
Galalith bekee Wikipedia
Nkume ọla Milk
Categories Nlekọta ụlọ Igodo bọtịnụ
Ihe 18 kwuru na "Otu esi eme plastik site na mmiri ara ehi ma ọ bụ Galalith"
November 7, 2010 na 7:34 pm
Ọ dịghị ihe na-ada ada, na mgbakwunye na imebi, ọ na-ere ure. Ọ dị m ka ọ bụ plastik dị mma, n'ezie.
Jenụwarị 2, 2011 na 5:35 pm
Ndewo ọma, achọrọ m ịgwa gị na emegoro m nnwale ahụ, enweghị m nsonaazụ ya, mana mgbe m nwere ha, m ga-edetara gị akwụkwọ ọzọ, oge a bụ ịgwa gị na nnwale a pụtara n'ọtụtụ akwụkwọ na Bekee , na Spanish naanị m hụrụ post dị ka ebe a. Na nsụgharị ndị m hụworo, ha na-ekpo mmiri ara ehi ahụ (na-enweghị esi) ha na-agagharị na gburugburu, enwere ndị na-agbakwunye mmanya nta nke nta na ndị na-eme ya otu, nke bụ eziokwu bụ na mmiri ara ehi "acha" na-eke akpụ , ndị a bụ Ha ga-emerụ ahụ, MA ka mma iji akwa ma ọ bụ nza iji wepu mmiri mmiri dị ka o kwere mee, mee ka ọdịdị ahụ na mgwakota agwa (casein) nke na-anọgide na nzacha (jiri aka ma ọ bụ ebu) ma hapụ ebe dị ọkụ, Peoplefodu ndi hapu ya na radiator, amaghi m ma bred ga aru oru @ _ @ Maka agba o bu iji sulfate copper, sodium hydroxide, wdgz (nkea bu doc, ma obu na asusu bekee): http://facstaff.bloomu.edu/mpugh/Experiment%2011.pdf (onye ntụgharị google?) na vidiyo nke nwere ike ịkọwa opekempe: http://www.metacafe.com/watch/310971/how_to_make_plastic_at_home_from_milk/ Echere m na m nweela enyemaka, ebe m hụrụ na enwere ọtụtụ obi abụọ ma nwee mwute ma ọ bụrụ na ọ bụghị otu ahụ. Ekele dị ekele.
Jenụwarị 13, 2011 na 3:02 am
Ọ dị mma, lee iwe iwe iji hụ foto nke okwu Galalith ma ọ bụghị nweta ya ¬ ¬. Enweghị m ndidi ịhapụ "plastik" ahụ maka izu abụọ, ahapụrụ m ya ihe dị ka ụbọchị atọ, ọ dịkwa mkpa ịkọwapụta na ebu m mere siri ike (ihe dịka 2cm) mgbe ike gwụrụ m ghee ya. na nke kachasị dị ala, obere oge na ịkwụsị usoro ahụ, dị ka a ga - asị na ọ bụ okpomoku ọkụ ma ọ bụ nke radiator, mana nsonaazụ bụ ... kuki dị iche, dị ka ọ dị, yana ikuku ikuku dị n'ime ya, ọ bụghị dị ka plastic n'ebe ọ bụla na ọ bụ nnọọ manụ na ọ mere na ahụghị m data mma erigbu. Ndo maka enyemaka na-enweghị isi. Daalụ
Abụọ 10, 2011 na 4:47 pm
kedu ka esi eji ya
June 16, 2011 na 6:15 am
kwa mfe…. Ọ bụrụ na ịchọghị ka ọ gbajie, ị ga-ebu ya 20kg / cm2 ma hapụ ya kpọrọ nkụ ogologo oge enwere ike
Septemba 14, 2011 na 2:07 am
Ezigbo nwanne m,
You nwere ike ịgwa anyị Ihe dị mkpa iji wuo a obere ụlọ ọrụ kaadị Galalith?
Ị mara ihe ụfọdụ banyere ya?
Jenụwarị 26, 2012 na 2:51 am
Emere m ya na ọtụtụ mmiri ara ehi na nke kachasị rụọ ọrụ maka m bụ yana mmiri ara ehi soy na ha ga-echekwa ụbọchị 2 izu ike
November 6, 2020 na 4:03 pm
Ndi nwe obodo: Ihe unu n’eme bu dika ime chiiz, ebe casein bu ihe mejuputara chiiz tinyere abuba di n’ime mmiri ara ehi, n’ihi ya, o gha adi ire anya dika plastik. Ekele m unu niile.
November 12, 2020 na 1:46 am
Nke ahụ bụ ihe rụrụ arụ «CHEESE» .Ọ ka mma tinye ya na achịcha ahụ ma nwee ọmarịcha onces.
1 Nzọụkwụ site na nhazi
2 Nnwale mbụ na-eme Galalith
3 Maka nyocha ndị ga-eme n'ọdịnihu
4 Njirimara nke casein
4.1 akụkọ ihe mere eme
5 Isi mmalite na amaokwu